Blog » OMGoodness
Saint San Sandy Win Htet April 18, 2018
Give yourself foradetox diet week?? Try our OMGoodness Special Thingyan Detox plan. Promotion is available now (the price is as low as 63,000…
omg March 6, 2018
Statistics for ailments like lower back pain are skyrocketing – according to the American Chiropractic Association, 31-million Americans are experiencing lower back-pain at any given…
omg February 22, 2018
Everyone should be known which foods are good for health and why. In this article, I wrote the benefits, causes, and quick tips about the…
အားလုံးအတွက် အင်တာနက်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ Weight Loss Tricks တွေထဲက ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတဲ့ Result ကို ရပြီး ဘယ်ဟာက သိပ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာကို သိရဖို့ စာရေးသူတစ်ဦးက Bright Side ရဲ့ website မှာတင်ထားတာလေးကို ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ One of the Bright Side writers decided…
7 Benefits When You Reduce Sugar Intake
omg February 21, 2018
Sugar is known to be not only addictive, but potentially dangerous. Consuming great amounts of it can be as hard on your liver as alcohol.…
omg February 17, 2018
သင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ vitamins နဲ minerals လို အာဟာရဓာတ်တွေ လိုအပ်သလို သင့်အရေပြားရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အစိုဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးပြားခြောက်သွေ့လာရင် သင့်အသားအရေ ချောမွေ့မှုမရှိတော့ပဲ အရေးကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အစိုဓာတ် လိုအပ်တာဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေသာမက သာမန်အသားအရည်၊ အဆီပျံတဲ့အသားအရေရှိသူများပါ ဂရုစိုက်ရမှာဖြစဿ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းမထားနိုင်ရင်တော့ သင်ဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အသက်ကြီးနေသလို ခံစားရစေမှာပါ။…
12 AWFUL COOKING MISTAKES YOU NEED TO AVOID
omg February 13, 2018
Cooking isadangerous proposition. No matter how well-intentioned the idea of making your own casserole instead of ordering takeout might be, the kitchen is…
omg February 6, 2018
သွေးအတွင်း cholesterol များခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဟာ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် လူသတ်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နှစ်စဉ် လူဦးရေတစ်သန်းနီးပါဟာ နှလုံးရောဂါကို ခံစားနေကြရပြီး ၄ပုံ၁ပုံခန့်ဟာ နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးကြရပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ cholesterol ကိုလျှော့ချပေးတဲ့ ဆေးဝါးတွေရှိနေပေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင်နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ပုံစံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာပါပဲ။ ဒီ Video File လေးမှာ bad cholesterol လျှော့ချပေးပြီး နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အစားအသောက် ၇မျိုးကို…
5 Reasons Japanese People Stay Slim And Don’t Look Old!
သင်သာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ဖူးခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ ဆုံဖူးခဲ့ရင် သင့်စိတ်ထဲကို ရောက်လာမှာက “ဘာလို့ ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေက သွယ်လျပြီး အမြဲနုပျိုနေရတာလဲ” ဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အသက်ရှည် ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းတွေပှေါမှာ ထိုင်နေကြသူများဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပှေါမှာ အသက် ၁၀၀ ကျှောနေရသူ အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသော နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ…
omg January 30, 2018
Rachel Aust show you how to burn your fat within 8 weeks in daily 20 mins.